Uthando Njengesifiso Sezocansi Umklomelo Wokubonga Uthando, Ubulili Ne-Inthanethi
Ikhaya Relationships Uthando njengesifiso sobulili
Isifiso sobulili, ukushayela ngokuya ocansini, ukuxubana noma umuzwa wokuzifisa, kuyisimo somvuzo wemvelo, noma isifiso, esenziwa yi-neurochemical i-dopamine. Kulo mongo i-dopamine ivuselela 'ukulindela' komvuzo, isifiso nokufuna. Umsebenzi walo oyinhloko ukusikhuthaza ukuba sibe nezinsana, kungakhathaliseki ukuthi sifuna ukuba nomntwana noma cha, uma senza uthando.
Imvelo ine-agenda ecacile futhi enamandla - ukuthola lezo zakhi zofuzo esizukulwaneni esilandelayo. Iyakhula ngokuhlukahluka kofuzo. Isizathu salokhu ukuqinisa i-gene pool. Ukuqothula kubangela ukukhubazeka kwezakhi zofuzo kanye nokukhathazeka kwezempilo. Lena inkinga emasikweni amaningi lapho ukushada nabazala bomzala kuyisimiso. Ukuba nezinhlobonhlobo zezakhi zofuzo kusho ukuthi uma kukhona isifo sezifo noma ezinye izinguquko ezinkulu ezimweni eziphilayo, kunamathuba amaningi ukuthi abanye abantu bayoba nokuxuba kwezakhi zofuzo ezizobenza bakwazi ukuba basinde.
I-Orgasm, ukuzwa okujulile kwenjabulo okuyiyona iningi lomgomo wesenzo socansi, isusa ukuhlaselwa kwamakhemikhali e-neurochemicals, i-opioids, esibhekana nayo njengenjabulo. Ngaleso sikhathi i-dopamine iyeka ukuphonswa emgwaqweni wokuvuza. Noma yikuphi okusele kubuyiselwa emuva ohlelweni olulungele ithuba elilandelayo lokusithuthukisa emgomweni wokuphila, okwamanje okwenziwe.
Isifiso sokuzwa ukuzwa kwenjabulo enkulu sisishukumisela ukuba siphinde senze lesi sinyathelo ngokuphindaphindiwe. Kuzo zonke imivuzo yemvelo, i-orgasm yiyona eyenza ukukhululwa okukhulu kwe-dopamine nokuzwa kwenjabulo ohlelweni lomvuzo lobuchopho. Yindlela enkulu eyinhloko yesimiso sokusenza sigcine ukutshala nokukhiqiza izingane eziningi.
Kodwa kukhona inkinga ohlelweni, kungenjalo sonke singathanda futhi siphile ngenjabulo njalo, futhi abameli behlukaniso ngeke babe matasa kakhulu.
<< Bhangqa Izithandani Ezihlanganisayo Umphumela we-Coolidge >>